श्रीमान पराजुलीका ४ श्रीमती, जुवाको खालदेखि देउवासँग एउटै थालसम्म ! | नेपाल आज
श्रीमान पराजुलीका ४ श्रीमती, जुवाको खालदेखि देउवासँग एउटै थालसम्म !
न्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दा श्रीमान भनिन्छ । श्रीमानको दोहोरो अर्थ हुन्छ । मानको पनि श्रेष्ठ र पति । लोकले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई मानका हिसाबले कुन श्रेणीमा राख्छ, बहस जारी छ । तर, पत्नीको संख्याका दृष्टिले श्रीमान पराजुली समकालीन समाजमा अग्रस्थानमा पर्ने देखिन्छ । अर्थात उनी चार श्रीमतीका श्रीमान हुन् ।
चार श्रीमतीका पति भए पनि पराजुलीले गैरकानूनी विवाह अर्थात बहुविवाह भने गरेका होइनन् । तीन श्रीमतीको बियोग बेहोरेका पराजुली अभागी श्रीमानका रुपमा परिवारमा चिनिन्छन् । दुई श्रीमतीको निधन स्वभाविक देखिए पनि एउटीको हत्या नै भएको आंशका परिवार र आफन्तले गर्दै आएका छन् । पराजुलीसँग कटु सम्बन्ध रहेकी श्रीमती (माइली)को रहस्यमय ढंगबाट निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दियो ।
घरमै जुवाको खाल !